merolagani - मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्नुहोस्, अन्यथा तपाईंको पैसाको मूल्य घट्नेछ
मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्नुहोस्, अन्यथा तपाईंको पैसाको मूल्य घट्नेछ
May 24, 2022 04:05 PM Merolagani
आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले भनेका छन्, ‘रुस र ब्राजिल बाहेक आज लगभग हरेक देशमा ब्याजदर ऋणात्मक छ’। ऋणात्मक ब्याजदर भनेको तपाईंले निश्चित निक्षेपमा मुद्रास्फीतिको दरभन्दा कम ब्याज पाउनु हो। यसलाई नकारात्मक रिटर्न पनि भनिन्छ।
नकारात्मक प्रतिफलले तपाईंको वित्तीय लक्ष्यहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यस्तो अवस्थामा वित्तीय योजनाकारको सल्लाह पालना गरी लगानीकर्ताले मुद्रास्फीतिभन्दा बढी प्रतिफल पाउने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ। हामी तपाईलाई नकारात्मक रिटर्न भनेको के हो? र यो कसरी बच्न सकिन्छ? भन्ने बारे बताउछौँ।
सबैभन्दा पहिले नकारात्मक रिटर्न के हो बुझ्नुहोस्?
जब तपाईले आफ्नो लगानीमा मुद्रास्फीति दरभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुन्छ, यसलाई नकारात्मक प्रतिफल भनिन्छ। मानौं तपाईंले बैंकमा फिक्स्ड डिपोजिट गर्नुभएको छ, जसमा तपाईंले वार्षिक ५ प्रतिशत प्रतिफल पाइरहनु भएको छ, तर खुद्रा मुद्रास्फीति दर ८ प्रतिशत छ भने तपाईंले आफ्नो लगानीमा मुद्रास्फीति दरको तुलनामा ३ प्रतिशतविन्दु कम प्रतिफल प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ।
पैसाको मूल्य ऋणात्मक रिटर्न भन्दा कम हुन्छ
मानौं तपाईले १०० रुपैयाँ लगानी गर्नुभएको छ जहाँबाट तपाई ५ प्रतिशत प्रतिफल पाउन पाउनुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा, यदि मुद्रास्फीति दर ८ प्रतिशत छ भने, तपाईंको पैसाको मूल्य वार्षिक रूपमा ३ प्रतिशतविन्दुले घट्नेछ। अर्थात् तपाईको १०० रुपैयाँको मूल्य घटेर ९७ रुपैयाँ हुनेछ।
उदाहरणः अहिले मुद्रास्फीति दर ८ प्रतिशतको नजिक छ। अर्थात् अहिले जुन वस्तुको मूल्य १०० रुपैयाँ छ, १ वर्षपछि त्यसको मूल्य १०८ रुपैयाँ हुनेछ। यदि तपाइँले लगानीमा ५ प्रतिशत प्रतिफल पाउनुभयो भने तपाइँको १०० रुपैयाँ १ वर्ष पछि १०५ रूपैयाँ मात्र हुनेछ। अर्थात् तपाईले ३ रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपर्नेछ।
रुल अफ ७० ले तपाईंलाई नकारात्मक प्रतिफलबाट बच्न मद्दत गर्नेछ
यस नियमका अनुसार, ७० लाई हालको मुद्रास्फीति दरले विभाजन गर्दा, तपाईंले आफ्नो लगानीको मूल्य कति छिटो आधा हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि मुद्रास्फीति दर अहिले ८ प्रतिशत छ भने, त्यसपछि तपाईंको पैसाको मूल्य लगभग ८ वर्ष १० महिनामा आधा हुनेछ। अर्थात्, यदि तपाईं आफ्नो १०० रुपैयाँको मूल्य १०० रुपैयाँ कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले त्यस्तो ठाउँमा लगानी गर्नुपर्नेछ जहाँ तपाईंले वार्षिक ८ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाउनुहुनेछ।
नकारात्मक प्रतिफलबाट बच्न कहाँ लगानी गर्ने?
बैंक र हुलाक कार्यालयहरूमा यस्तो कुनै योजना छैन जसले तपाईंलाई मुद्रास्फितिभन्दा बढी रिटर्न दिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, यदि तपाईले थोरै जोखिम लिन सक्नुहुन्छ भने, तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा म्युचुअल फन्ड वा स्टक मार्केटको इक्विटी योजनाहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ।